May and Merkel backing Mnangagwa is bad news for Zimbabwe – Skyafrica24
When asked if she endorses President Emmerson Mnangagwa’s strongly disputed victory in Zimbabwe’s July 30 presidential election, a wily-looking May immediately alluded to the commission of inquiry which the formervowed to establish to look into the army’s violent crackdown on opposition supporters.
Unimpressed by her cagey response, the interviewer asked May a second timewhether she endorsed the Zimbabwean president. “Mnangagwa is an elected president,” said the British PM, “He is taking an important step in saying that he will set up a commission of inquiry. I think this is a very important signal from him about the Zimbabwe he wants to see.”
Mueller also met Mnangagwa during his visit and announced that Germany willopen new lines of credit for Zimbabwean businesses.
Author Ahmed KhaledPosted on Thursday, September 6, 2018 Wednesday, September 5, 2018 Categories PoliticsTags Southern Africa, Zimbabwe
Previous Previous post: Senegal is building a $2 billion futuristic city to help cut down on overcrowding in Dakar
Next Next post: Tunisian fishermen await trial after ‘saving hundreds of migrants’